KLM Royal Dutch Airlines: sidina voalohany manerantany amin'ny solika synthetic
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » KLM Royal Dutch Airlines: Fiaramanidina voalohany amin'ny solika syntetika
Airlines • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao Mafana Netherlands • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao • tompon'andraikitra • teknolojia • Tourism • Fitaterana • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
KLM Royal Dutch Airlines: Fiaramanidina voalohany amin'ny solika syntetika
Ny fifindrana miala amin'ny lasantsy fosily mankany amin'ny safidy maharitra dia iray amin'ireo fanamby lehibe atrehan'ny orinasam-piaramanidina
Ny sidina KLM avy any Amsterdam mankany Madrid tamin'ny volana lasa teo tamin'ny tontolo voalohany nidina an-tsolika
Fampivoarana ny lasantsy synthetic aviation sy lakile biofuel hampihenana ny entona entona
Ny solika maharitra dia mety hitondra ny anjara birikiny lehibe indrindra amin'ny fampihenana ny entona amin'ny fiaramanidina fiaramanidina vaovao
Nanambara ny governemanta holandey sy ny KLM Royal Dutch Airlines androany fa sidina ara-barotra ny mpitatitra avy any Amsterdam ka hatrany Madrid ny volana lasa teo no sidina voalohany manerantany mitondra solika synthetic.
Ny fampandrosoana sy ny fametrahana ny solon'ny synthetic sy biofuel amin'ny solitany dia hita ho fanalahidin'ny ezaka maharitra mba hampihena ny entona entona avy amin'ny fiaramanidina.
Ny fiaramanidina KLM dia nampiasa solika mahazatra mifangaro 500 litatra (132 litatra) petrole vita amin'ny Royal Dutch Shell miaraka amina karbônika dioxide, rano ary loharano angovo azo havaozina, miaraka amin'ny solika mahazatra hampandeha ny fiaramanidina, hoy ny fanambarana iray.
"Ny fanaovana ny indostrian'ny fiaramanidina maharitra kokoa dia fanamby atrehintsika rehetra," hoy ny minisitry ny fotodrafitrasa holandey Cora van Nieuwenhuizen. “Androany, amin'izao tontolo izao aloha, dia miditra amin'ny toko vaovao amin'ny sidina isika.”
Ny solika maharitra dia mety hitondra ny anjara birikiny lehibe indrindra amin'ny fampihenana ny fandefasana entona an'habakabaka vaovao, hoy i Pieter Elbers, izay mitarika ny KLM, ny sandan'ny Air France KLM, Holandey.
"Ny fifindrana miala amin'ny solika fôsily mankany amin'ny safidy maharitra dia iray amin'ireo fanamby lehibe atrehin'ity orinasa ity," hoy i Elbers.